ထမင်း - Rice Dishes | ရှမ်း - Shan | ဟင်းသီးဟင်းရွက် - Vegetables
ချက်နည်းရော ၊ စားနည်းရော ၊ ရေးပေး လိုက်ပါပြီနော်။ မိသားစုရဲ့ ညနေဖက် အလုံး လုပွဲကိုတော့ ပြောမပြတော့ ပါဘူး ။
ဖိုးဖိုးဖွားဖွားက အစ ၊ ဘေဘီလေး အဆုံး အကုန် ကြိုက်ကြမှာပါ ။ ကျမ်းမာပြီး ပျော်ရွှင်သော မိသားစုလေး ဖြစ်ကြပါစေ ။
ဆန် နို့ဆီဗူး 3လုံး ချက်ဲတဲ့အထဲကို ဆနွင်းနဲနဲ ၊ ဆားနဲနဲထဲ့ ပြီး အနဲငယ်ပျော့ ယုံချက်ပါ ။ ရေငှဲ့ ချက်ချက် ၊ ပေါင်းအိုး နဲ့ ချက်ချက် ရပါတယ် ။
အာလူး 30သား ပြုပ်ပြီး အခွံကို နွှာပါ ။
ပဲပုတ် 2ချပ်ကို မီးလေးပြပြိး ကင်ရ်ျ အမှုန့် လုပ်ပါ ။ မြေပဲလှော်ကိုလည်း အမှုန့် လုပ်ထားပါတယ် ။
ခရမ်းချဉ်သီး 30သားကို ပါးပါးလှီး ၊ ကြက်သွန်နီလတ် ၁လုံး ၊ ကြက်သွန်ဖြူ 3မွှာကို ထုထောင်းပြီး ဆီသတ်ပါ ။
ပြီးလျင် ပဲပုတ်မှုန့် ၊ မြေပဲမှုန့် ထဲ့ ပါတယ် ။အရည်က အနှစ်မို့၊ မပြစ်မကျဲမို့ ၊ ရေလိုသလောက် နဲနဲထဲ့ ပြီး. အပေါ့ အငံမြည်းပြီး ဆားထဲ့ ပါ ။
ကိုင်းခရမ်းချဉ်နဲ့ ၇ိုးရိုးခရမ်းချဉ်ရောချက်တာက အချဉ် အရသာ ရတာမို့ ပိုကောင်းပါတယ် ။ ရိုးရိုး ခရမ်းချဉ်နဲ့ဆို မချဉ်ရင် မကျီးရေ နဲနဲလေးထဲ့ ပါ ။ သိတ်မချဉ်ရပါ ။ ချဉ်တယ်ဆိုယုံလေးပါ ။ ချဉ်တဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး အရသာလောက်ပဲ ချဉ်ပါ ။
ကြက်သွန်နီ 20 သား ၊ ဆီ 15 ကျပ်သားနဲ့ဆနွင်း နဲနဲထဲ့ ပြီး ဆီချက် ချက်ထားပါ ။
ထမင်းကို အအေးနဲနဲ ခံပြီး အာလူးတွေချေထဲ့ပြီး ဆီချက် တဇွန်း (ဆီရော အဖတ်ပါ) ထဲ့ ပြီး စီးအောင် နယ်ပါ ။ 9.ြ
ပြီးရင် တခါစား အလုံးလေး လုပ်ထားပါ ။ အလုံးလေးတွေကို ဆီပုတ်ပြိး စီထားပါမှ ဆီခနခန မကိုင်ရမှာပါ ။ (ထမင်းထဲ ခရမ်းချဉ်သီးချက် နဲနဲထဲ့ နယ်လေ့ လဲရှိပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ငါးပြုတ်သားကို ထဲ့ နယ်တတ် ကြပါတယ်။)
ဂျူးမြစ် ၊ နံနံပင် ၊ ကြက်သွန်မိတ် ၊ ငငြုပ်သီးတောင့် ကြော် တို့နှင့် တွဲဖက် စားပါ ။
ပုဂံထဲအလုံးထဲထဲ့ ၊ ဖိပြားပြီး အပေါ်က ခရမ်းချဉ်သီးချက်ဆမ်း ၊ ဆီချက်ဖြူးပြီး တွဲဖက်တွေနှင့် ကြိုက်သလို ထဲ့ ပြီး စားနိုင်ပါတယ် ။ (ကိတ်မုန့် စားသလို တဇွန်းခြင်း ဖဲ့ ဖဲ့ စားကြည့်ပါ ။ ချဉ်တဲ့ အရသာ ၊ ဆိမ့်တဲ့ အရသာနဲ့ ပဲပုတ်ရဲ့ မွှေးတဲ့ အရသာပါ တခုစီ ခံစားရမှာပါ ။ )
Recipes | ကိုရီးယား - Korean | ထမင်း - Rice Dishes | နိုင်ငံတကာ အစားစာများ - International Food